ဂျင်းလေး စက်မှု Deep Fryer သည်အိုးတလုံး၊ အက်စ်အက်စ်ဘောင်၊ အပူပိုက်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သေတ္တာ၊ တောင်းပန်းကြော်၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊, filter စနစ်;
The စက်မှု Deep Fryer သည်အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ မြန်ဆန်သောအပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောအပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း၊ မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊
အသုံးချမှုနယ်ပယ် - အသားကြက်သား၊ ငါး၊ ကြက်သားတစ်ခုလုံး၊ ကြက်ခြေထောက်၊ ၀ ံပုဇွန်၊ ပုစွန်အချပ်၊ အသားအပိုင်းအစများ၊ ပြင်သစ်ကြော်၊ အာလူးကြော်၊ မြေပဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည်တို့။
2.Material: SUS304 / 316L;
4. အပူပေးခြင်းအမျိုးအစား - အရည်ပရိုပိန်း (LPG)၊ လျှပ်စစ်၊
6. အခြင်းတောင်းသည်လှန်နိုင်ပြီး၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအပေါက်များကဆီအများစုကိုစစ်ထုတ်လိမ့်မည်။
၁။ အလိုအလျောက်အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း၊ လိုအပ်သောအပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းညှိစက်သည်အမှန်တကယ်ဆီအပူချိန်နှင့်အညီအလိုအလျောက်ညှိပေးမည်ဖြစ်သည်။ လက်စွဲမပါဘဲအလုပ်သမားများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ရေနံသုံးစွဲမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေသည်။
ရေနံအကြွင်းအကျန်များကိုအလိုအလျောက်ခွဲထုတ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်စစ်ထုတ်ခြင်း။ ဒယ်အိုးထဲတွင်ဆီကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရန်မလိုပါ။ အပူအောက်မှတိုက်ရိုက်၊ ဆီအားလုံးကိုထုတ်လွှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်သိုလှောင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများသိုလှောင်ထားရန်မလိုပါ။ တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြော်ထားသောအစားအစာများကိုအားလုံးကြော်နိုင်သည်။ အသားပြုတ်အစာအမျိုးမျိုးကိုလည်းပြုတ်နိုင်သည်။
၃။ လျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်း။ ကြော်ခြင်း၊ ခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းပြီးနောက်အစားအစာသေတ္တာတစ်ခုလုံးအလိုအလျောက်ထွက်သွားလိမ့်မည်။
၄။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ အပူပေးစက်မှရေနံ၏အလယ်တွင် ဖြတ်၍ အပူပေးစက်။ အပူကိုဖြုန်းတီးရန်နေရာမရှိပါ။ ရေနံ၏အပူချိန်ကိုအပူပေးလေ့ရှိသည်။ ရိုးရာဘွိုင်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆၅% ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ ကျောက်မီးသွေးလောင်ကျွမ်း
နောက်တစ်ခု: Colloid စက်
သန့်ရှင်း Centrifugal Pump